Serasera.org - Blog: Blaogy.com - Tolotra vaovao
Blaogy.com - Tolotra vaovao
Naseho masoandro androany indray ny Blaogy.com, tolotra vaovaon'ny serasera.org. Toerana ahafahan'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny serasera manana ny blaoginy manokana. Blaogy, tahirintsary sy maro hafa ihany koa.
Mbola Version Beta ihany io fa sady manatsara azy izahay.
Raiso ary ny anjara blaoginao ao amin'ny http://blaogy.com
Ireto avy ny zavatra atolotry ny Blaogy.com amin'izao fotoana izao... ary tsy mitsaha-mitombo izany.
Endritsoratra hita avy hatrany
Rehefa manoratra ianao dia hitanao avy hatrany na hataonao matevina na sora-mandry na voatsipika na voatsipika koa ny teny.
Mora dia mora ny fampidirana sary. Azonao alaina avy ao amin'ny Rakitra (Ressources) na sary efa mipetraka any amin'ny toeran-kafa.
Lahatsoratra isaky ny sokajy
Izany hoe avondrona isaky ny sokajy ny lahatsoratrao tsirairay.
Hevitra isaky ny lahatsoratra
Misy toerana ahafahan'ny mpitsidika mametraka hevitra amin'ny lahatsoratra napetrakao ao amin'ny blaoginao. Azonao amboarina mba hahazo filazana ianao isaky ny misy mametraka hevitra amin'ny lahatsoratra. Ary azonao atao ny manaiky na tsia ny fametrahana hevitra.
Mbola azonao tsy avoaka ny lahatsoratra nosoratanao fa azonao tehirizina ao anaty vakiraoka.
Eny, afaka manana tahirintsary ihany koa ianao hametrahanao ny sary isankarazany.
Misy endrika isan-karazany azonao isafidianana, ary azonao ovaina hatrany. Raha misy endrika mety mahaliana anao hafa ihany koa kanefa tsy ao anaty lisitra dia azonao ilazàna izahay dia ezahina hampidirina.
Mampiasa teny maro
Raha tianao hiteny hafa ankoatra ny malagasy ny blaoginao dia afaka misafidy teny hafa ihany koa ianao.
Mbola misy zavatra hafa izay hapetraka tsikelikely ihany koa fa miankina amin'ny filàn'ny tsirairay...
Publié par Eugene Heriniaina à 3/06/2006 10:58:00 AM
Efa hafindra any zany ity blaogy ity ? ;)
3/08/2006 06:07:00 PM
4/06/2006 10:06:00 AM
4/16/2006 06:23:00 PM